Exo 39 | Shona | STEP | Vakaitawo nguvo dzakarukwa zvakanaka nezvitema, nezvishava, nezvitsvuku, dzokushumira nadzo panzvimbo tsvene; vakaita nguvo tsvene dzaAroni, sezvakanga zvarairwa Mozisi naJehovha.
1 Vakaitawo nguvo dzakarukwa zvakanaka nezvitema, nezvishava, nezvitsvuku, dzokushumira nadzo panzvimbo tsvene; vakaita nguvo tsvene dzaAroni, sezvakanga zvarairwa Mozisi naJehovha.
2Akaita efodhi nendarama, nezvakarukwa zvitema, nezvishava, nezvitsvuku, nomucheka wakaisvonaka wakarukwa. 3Vakapambadzira ndarama, vakaita mabape matete, vakaicheka, vakaita nhare dzokusonisa nadzo zvakarukwa zvitema, nezvishava, nezvitsvuku, nemicheka yakaisvonaka yakarukwa, riri basa romunhu anogona. 4Vakaiitira mabandi pamafudzi akabatanidzwa; akanga akabatanidzwa pamiromo yayo miviri. 5Nebhanhire rakarukwa nomubati wakachenjera, rakanga riri pamusoro payo, rokuisunga naro; chakanga chiri chinhu chimwe chete nayo, rakaitwa saiyo; rendarama, nezvakarukwa zvitema, nezvishava, nezvitsvuku, nemicheka yakaisvonaka yakarukwa, sezvakanga zvarairwa Mozisi naJehovha.
6Vakagadzira mabwe eonikisi, akanyudzwa mukati mezviruva zvendarama, mazita avana vaIsiraeri akanyorwapo, sezvinonyorwa ibwe rokusimbisa. 7Akaaisa pamabandi apamafudzi eefodhi, kuti ave mabwe okurangaridza vana vaIsiraeri, sezvakanga zvarairwa Mozisi naJehovha.
8Akaitawo hombodo yechipfuva, raiva basa romubati wakachenjera, sezvakaitwawo efodhi; akaiita nendarama, nezvakarukwa zvitema, nezvishava, nezvitsvuku, nemicheka yakaisvonaka yakarukwa. 9Yakanga ine nhivi ina dzakaenzana; vakaita hombodo yechipfuva ine mheto mbiri; kureba kwayo kwakanga kwakaita sapanosvika minwe, noupamhi hwayo sapanosvika minwewo, ine mheto mbiri. 10Vakaisa mukati mayo misara mina yamabwe, mumwe musara waiva nesadhio, netopasi, nekabhunakeri. Ndiwo musara wokutanga. 11Napamusara wechipiri simaradhino, nesafiri, nedhaimani.
12Napamusara wechitatu haikindi, neagati, neametisi. 13Napamusara wechina bheriri, neonikisi, nejasipiri; akanga akanyudzwa muzviruva zvendarama. 14Mabwe akanga akaita samazita avana vaIsiraeri, ane gumi namaviri, samazita avo; akanga akanyorwa sezvinonyorwa ibwe rokusimbisa, rimwe nerimwe rine zita raro, mazita amarudzi ane gumi namaviri. 15Napahombodo akaita zviketani zvakafanana norwonzi rwendarama yakamoniwa yakaisvonaka. 16Vakaitawo zviruva zviviri zvendarama, nezvindori zviviri zvendarama, akaisa zvindori zviviri pamicheto miviri yehombodo yechipfuva. 17Vakaisawo zviketani zviviri zvendarama yakamoniwa pazvindori zviviri zvaiva pamicheto yehombodo yechipfuva. 18Nemimwe miromo miviri yezviketani zviviri, vakaiisa pamabandi apachipfuva cheefodhi nechemberi kwayo. 19Vakaitawo zvindori zviviri zvendarama, vakazviisa pamicheto miviri yehombodo yechipfuva pamupendero wayo, uri kurutivi rweefodhi nechomukati. 20Vakaitawo zvindiro zviviri zvendarama vakazviisa pamabhande maviri apamafudzi eefodhi zasi nechemberi kwayo, pedo napayakabatanidzwa napo, pamusoro pebhanhire reefodhi rakarukwa nouchenjeri. 21Vakasunganidza hombodo yechipfuva nezvindori zvayo pazvindori zveefodhi norwonzi rutema, kuti ruve pamusoro pebhanhire reefodhi rakarukwa nouchenjeri, kuti hombodo yechipfuva irege kusununguka paefodhi, sezvakanga zvarairwa Mozisi naJehovha.
22Akaitawo jasi reefodhi rakarukwa; rose rakanga riri romucheka mutema. 23Akaita buri rejasi pakati paro, seburi renguvo yokurwa, rakanga rinomupendero wakapoteredza buri raro, kuti rirege kubvaruka. 24Pamipendero yejasi vakaita matamba ezvakarukwa zvitema, nezvishava, nezvitsvuku, nomucheka wakarukwa. 25Vakaitawo zvitare zvinorira zvendarama yakaisvonaka; vakaisa zvitare pakati pamatamba pamipendero yejasi, kunhivi dzose, pakati pamatamba; 26pakava nechitare chimwe nedamba rimwezve, pamipendero yejasi kunhivi dzose, rikava jasi rokushumira naro, sezvakanga zvarairwa Mozisi naJehovha.
27Vakaitira Aroni navanakomana vake nguvo dzakarukwa nomucheka wakaisvonaka, 28nenguwani yomucheka wakaisvonaka, nedzimwe nguwani dzakanaka dzomucheka wakaisvonaka, namabhuruku omucheka wakarukwa wakaisvonaka, 29nebhanhire romucheka wakaisvonaka wakarukwa, nezvakarukwa zvitema, nezvishava, nezvitsvuku, rikava basa romusoni anogona, sezvakanga zvarairwa Mozisi naJehovha.
30Vakaitawo hwendefa rekorona tsvene nendarama yakaisvonaka, vakanyora pamusoro paro sezvinonyorwa ibwe rokusimbisa, vachiti: MUTSVENE KUNA JEHOVHA. 31Vakasungira pariri rwonzi rutema, kuti varibatanidze naro panguwani kumusoro, sezvakanga zvarairwa Mozisi naJehovha.
32Naizvozvo basa rose retabhenakeri yetende rokusangana rakapera; vana vaIsiraeri vakaita zvose zvakanga zvarairwa Mozisi naJehovha, vakaita saizvozvo.
33Zvino vakauya netabhenakeri kuna Mozisi, zvaiti: tende nenhumbi dzaro dzose, nezvikorekedzo zvaro, namatanda aro, nembariro dzaro, nembiru dzaro, nezvigadziko zvaro; 34nechifukidzo chamatehwe amakondohwe akazodzwa muti mutsvuku, nechifukidzo chamatehwe amatenhe, nechidzitiro chokudzitira nacho; 35neareka yechipupuriro, namatanda okutakura nawo, nechifunhiro chokuyananisa; 36netafura, nenhumbi dzayo dzose, nechingwa chokuratidza; 37nechigadziko chakaisvonaka, nemwenje yacho, mwenje yokugadzirirapo, nenhumbi dzacho dzose, namafuta okuvhenekesa nawo; 38nearitari yendarama, namafuta okuzodza nawo, nezvinonhuwira zvakanaka, nechidzitiro chomukova wetende; 39nearitari yendarira, nechakarukwa chayo chendarira, namatanda, nenhumbi dzayo dzose, nomudziyo wokushambidzira, nechigadziko chawo; 40nezvirembedzwa zvaparuvanze, nembiru dzazvo, nezvigadziko zvadzo, nechidzitiro chesuo roruvanze, norwonzi rwacho, nembambo dzacho, nenhumbi dzose dzokubata nadzo patabhenakeri, patende rokusangana; 41nenguvo dzakarukwa zvakanaka nouchenjeri dzokushumira nadzo panzvimbo tsvene, nenguvo tsvene dzaAroni mupirisiti, nenguvo dzavanakomana vake, dzokushumira nadzo pabasa roupirisiti. 42Zvose sezvakanga zvarairwa Mozisi naJehovha, saizvozvo vana vaIsiraeri vakaita mabasa ose. 43Mozisi akatarira mabasa ose, akaona kuti vakanga vaaita sezvakanga zvarairwa naJehovha, ndizvo zvavakaita; Mozisi akavaropafadza.